पर्व र उत्सवहरुमा धार्मिक कर्तव्यको बाध्यता हटाईदिने हो भने आमजनले कम्तीमा क्षणिक सुखको अनुभूति गर्नसक्दछन् । होइनभने पर्व र उत्सवहरु सम्पन्न मानिसहरुको निम्ति मौजमस्तीजन्य आनन्द हुनसक्दछ , अभावग्रस्त आमजनको निम्ति धार्मिक कर्तव्यको सन्तुष्टि त होला , खुशी त खै !
एउटा चुटकुला तपाँंईलेपनि सुनेको हुनुपर्दछ ; “एकजना धर्मभीडू मानिसले भगवानसंग भन्यो – मलाई केहीगरि एकलाख रुपैया दिलाई देउ । तिमीले यसो ग¥यौ भने म तिमीलाई एक हजारको प्रसाद चढाउँंछु र विश्वास छैनभने आफ्नो भागको एकहजार कटाएरै मलाई उनान्सयहजार नौसय उनान्सय रुपैया नै दिलाइदेउ ।” यो मानवीय प्रवृत्तिमाथी व्यङग्य हो । उत्सव र पर्व–त्योहार प्रधान हिन्दुसमाज बाह्रै महिना कुनै न कुनै साँंस्कृतिकपर्व वा धार्मिकउत्सव मनाई रहेकै हुन्छ । तर दशैँंदेखि छठसम्मको अवधि उनिहरुको निम्ति विशेष हुँंदो रहेछ । यस अवधिमा एउटा धार्मिकभाव उनिहरुको चेतनामा हावी हुन्छ । दशैँंमाभगवतीसंग शक्तिकामना गरिन्छ, दिपावलीमा लक्ष्मीसंग धनधान्य र समृद्धिको कामना र छठमा सूर्य र षष्ठिदेवीसंग परिवारको स्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गरिन्छ । म सोच्दछु, पूजापाठ, उत्सव र पर्व–त्योहारमा देउतासामू दुईहात जोडेर र आँंखा मुँंदेर उभिएको मानिसले मनमनै के भनिरहेको होला ? उसले, भए आफैले कमाएको पैसा, नभए ऋण खोजेरपनि, यी पर्व र उत्सवहरु मनाउने बेला उही चुटकुलाको पात्रजस्तै देउतासंग विनती गरिरहेको त होला ? हे दुर्गामाता, हे लक्ष्मीमाता, हे छठ परमेसरी मेरो दुःख हरण गर, मेरो गरिबी मेटाउ, मलाई सन्तानसुख देउ, मेरो परिवार स्वस्थ्य होस, मेरो परदेशी प्रियजन घर फर्कुन, मेरो घरमा धन दौलतको अम्वार लागोस ताकि म सबै सुख भोग्न सकुँं ? त्यो दसदिनसम्म निराहार बसेको, आँंगन–घर सबैतिर धेरैभन्दा धेरै दीप बालेर लक्ष्मी बोलाईरहेको र पोखरी वा नदीको कठाङिग्रदो पानीमा थुरथुर काम्दै उभिएकी महिलाले यही त माँंगीरहेको होलिन्? देउताहरुको गीतमा पनि त यही भाव व्यक्त गरिएको हुन्छ । फरक कति हो भने चुटकुलाको पात्रले चढाउने रकम कटाएर दिन देउतालाई नै आग्रह गर्दछ भने पर्वहरुमा भक्तले काम फत्ते हुनुभन्दा पहिले नै देउतालाई चढावा वा अघ्र्य चढाउँंछ , कनै हाकिमलाई घूस दिएजस्तो । दिपावलीलाई सुकरातीपनि भनिन्छ । यो सुखरात्रीको अपभ्रंश हो । सुखको रात,लक्ष्मीलाई खुशी पारेर धनधान्य र समृद्धिको बरदान माग्ने रात । यस पर्वमा मानिसहरु आफूसंग भएका सबै सम्पत्ति अर्थात सुन, चाँंदी, गरगहना र नगदहरु लक्ष्मीको मूर्तिसामू राखेर धनलाई पूजाआजा गर्नेगर्दछन् । धनलाई धूप आरती देखाएर र पूजा अर्चना गरेको दृश्यले कस्तो भाव जगाउँंछ होला ? बढी से बढी धनको लालसा । द्रव्यपिपासु चेतना । समाजशास्त्रीहरुले यी पर्वहरुको समाजशास्त्रीय कारण बताउँछन् । यी पर्वहरु कृषिप्रधान छन् , यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु कृषिजन्य हुनेगर्दछ । कृषिकर्मबाट निवृत्तभएका खुशी र उल्लासित किसानसमुदायले देउतालाई खुशी पार्न र आफ्नो उब्जनीको एउटा हिस्सा देउतालाई अर्पण गर्ने अवसरको रुपमा पर्व, तिहार र धार्मिक उत्सवहरुको व्याख्या उनिहरुले गर्दछन् । उनिहरुका अनुसार युगपरिवर्तन भएर कृषिजन्य वस्तुको ठाउँं धन वा मौद्रिकवस्तुले लिएपनि देउताको स्थान यथावत रहेकोले रहरले वा बाध्यताले होस देउतालाई खुशीपार्नु हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको कर्तव्य हुन गयो र अब पर्व र उत्सवहरुको खुशी धार्मिक कर्तव्यपालनमा सीमित भएको छ । दिपावली वा लक्ष्मीपूजामा धनको पूजा यसै युगपरिवर्तनको परिणाम हो । आध्यात्मिक चिन्तक र पक्षधरहरुले यी पर्व र उत्सवहरुलाई इश्वर र मनुष्यबीच आध्यात्मिक सम्बन्धसूत्र र आध्यात्मिक मुक्तिको निम्ति चिन्तनको रुपमा व्याख्या गर्नसक्दछन् । धार्मिक कर्मकाण्डीहरुले यो सारा जगत इश्वरको भएको र मानिसले प्राप्तगरेको सबै भौतिकसम्पदा इश्वरले नै दिएकोले उसलाई अध्र्यदिएर वा प्रसाद चढाएर मानिसले कृतज्ञता अर्पण गरेको व्याख्या गर्नसक्दछन् । तर ई सबै व्याख्यामा एउटा प्रश्नभने यथावत् नै रहन्छ — मानिसले यी सारा उद्यम किन गर्दछ ? संश्लेषण गर्ने हो भने भौतिक होस वा आध्यात्मिक, जवाफ एउटै आउँंदछ, सुखप्राप्तिको निम्ति । त्यसोभए के उसले सुख प्राप्त गर्दछ ? अर्कोवर्ष उ अघिल्लो वर्षझैँं पुरानै मुद्रामा देउतासामु उभिएको हुन्छ र भनिरहेको हुन्छ — हे प्रभू ! म दीन–दुःखी, अधम, पतीतको उद्धार गर । यो के भएको हो अघिल्लो वर्ष खुशी र हाँंसी रहेको मानिस त पर्व, तिहार र उत्सव सकियो कि फेरी दुःखी हुनथाल्छ । के उत्सवहरुबाट प्राप्त सुख क्षणिक हुन् ? के हो सुख ? किन मानिसहरु यसका पछाडी दगुरिरहेका हुन ? कहिलेदेखि मानिसहरु सुखका पछाडी दगुर्न थाले ? सुख मानसिक हो वा भौतिक हो ? के सुखको कुनै स्थायी आधार छ ? पर्व र उत्सवहरुलाई सामान्य दृष्टिले हेर्दा त सामान्य नै देखिन्छ, तर गहिरिएर विचार गर्दा यी दार्शनिकप्रश्नहरु उपस्थित हुन्छन् । वस्तुतः यी प्रश्नहरुले भौतिकरुपमा सामाजिक जटिलता, मानवीय नैतिकता र कर्तब्यको व्याख्या गर्दछ, जस्को अनुपालनमा खुशी वा प्रसन्नता जन्मने गर्दछ र आध्यात्मिकरुपमा काल्पनिक चेतनाको सर्वोच्चता, परमतत्वको प्राप्ति र मोक्षको स्थितिको व्याख्या गर्दछ, जसको निम्ति गरिएको उद्यमले एउटा धर्मभीडू मानिसमा आध्यात्मिक सुखानुभूति उत्पन्न गर्दछ । मानविय विकासको प्रारम्भिककालमा मानिसको जीवन वा बाँंच्ने आधार सरल थियो अर्थात उसका आवश्यकताका सामग्रीहरु पर्याप्त र प्राप्ति सहज थियो । त्यसैले प्रारम्भिक मानिस सबैप्रकारले स्वतन्त्र थियो । यति स्वतन्त्र कि स्वतन्त्रताको अर्थ नै थिएन । स्वच्छन्दता मात्र थियो । बस गतिशिलता थियो र जीवन थियो । त्यतिबेला मानवको प्रतिस्पर्धी मानव थिएन, हिंसक पशुहरु थियो । त्यसैले त्यतिबेला न कुनै मानवीय दुःख थियो न सुख थियो । मानवसमुदायहरु यन्त्रवत् प्रकृतिको स्वाभाव र परिवर्तनको गतिमा संचालित थिए । मानिसको जीवनमा फरक समुदायसंग प्रतिस्पर्धा र संघर्ष, जीवनको साधनको सुरक्षाको निम्ति संघर्ष, समाज, जनपद र राज्य, जनसंख्याको वृद्धि, र मानव–मानवबीचको संघर्ष र वर्गमा विभाजनले मानवमा दुःख र सुखको चेतनाको विकास गरायो । अब जीवन रक्षाका साधन वा सामग्रीहरु पर्याप्त रहेन र आवश्यकताभन्दा घटी हुन थाले । त्यसैले अब साधनहरुको अभाव दुःख र प्राप्ति सुख र पछि आवश्यकता अनुसार नभएपनि काम चलाउने जति भएपछि सन्तोषको भावपनि जन्म्यो । यी दुःख, सुख र सन्तोषका मनोभावहरु प्रारम्भमा भौतिक नै थिए । तर पछि राज्य र इश्वरिय चेतनाको विकास तथा राज्यसंग मिलेर वैचारिक सत्ताले भौतिक जगतमा सर्वोच्चता कायम गरेपछि दुःख, सुख र सन्तोषको आधार मानसिक हुनगएको देखिन्छ । कर्मकाण्डीहरुले अझ यसलाई पुनर्जन्म, भाग्य र पाप–पुण्यसमेत संग जोडेर प्रस्तुत गरे । इश्वरिय र धार्मिक चेतनाको उदयभन्दा पहिले पर्वहरुमा कृषिकार्यबाट फुर्सदीको उल्लासमा पछिगएर देउतालाई खुशीपार्ने धार्मिक कर्तव्यको बाध्यताको मात्रा बढी हुनुको पछाडी देउता, भाग्य, पाप र पुण्य नै थियो । प्रश्न त्यहीँं छ, सुख के हो ? अध्यात्मवादीहरुले सुखको व्याख्या भौतिकरुपमा सन्तोषमा र आध्यात्मिकरुपमा परमतत्वको प्राप्ति अर्थात परमतत्वमा विलिन वा मोक्षमा हेर्दछन् । उनिहरुले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निर्माण कुनै अलौकिक र अज्ञात वैचारिक सत्ताबाट भएको भन्दछन् । यस अलौकिक वैचारिक चेतनालाई उनिहरुले इश्वरिय वा ।।।परमचेतना’पनि भन्दछन् र यसलाई सार्वकालिक, सार्वभौमिक र सर्वशक्तिमान चेतनाको सर्वोच्च कल्पनासम्म यसरी पु¥याउँंदछन् कि यससंग एकाकारहुने भावनाले नै एउटा आनन्दानुभूति सिर्जना गर्दछ । उनिहरुको विचारमा यो आनन्दानुभूति परमसुखको स्थिति हो । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा अध्यात्मवादीहरुले ।।।परमचेतना’लाई नै ।।।आनन्द’ र ।।।सत्’ को रुप मान्दछन् । यो आनन्दातिरेक नै परमतत्वको स्थितिमा पुगेपछि भौतिकजगतको वास्वविकताको मूलोच्चेछदन हुन्छ र शुद्ध आत्मा जन्मेर आध्यात्मिकक आनन्द दिन्छ । सुखको यस परिभाषामा एउटा प्रश्न उठ्छ, के यो मृत्युपछिको अवस्थामा हो ? यस्तो हो भने भौतिक जगतमा पर्व र उत्सवहरुमा खुशी र आनन्द अनुभूत गर्नेहरुको निम्ति यसको कुनै अर्थ छैन, किनभने उनिहरुले धन, समृद्धि, स्वास्थ्यलगायत भौतिकसुखको कामना गरिरहेका हुन्छन् । यदि यो जीवनमै प्राप्तहुने सुख हो भने यो विभ्रम मात्र हो । किनभने कुनै योगी वा अध्यात्मवादी जस्तोसुकै परमचेतना वा परमतत्व प्राप्त गरेपनि जरा र मरणले उसको साथ छोडदैन र भौतिकजगत नियमबद्धरुपमै गतिशील रहन्छ । अर्थात परमतत्व प्राप्तगरेको मानिसपनि रोगी हुन्छ, बूढो हुन्छ, पीडाको अनुभूति गर्दछ र भौतिक परिवर्तनका सबै लक्षणहरु उसमा अभिव्यक्त हुनेगर्दछ ।त्युसोभए सुख र दुःखका भौतिक कारणहरु नै मुख्य हुन् त ? ठीक यही हो ।वस्तुतः अनन्त आवश्यकता र सीमित साधनभएको वर्तमान संसारमा अभाव दुःख हो भने प्राप्ति र प्राप्तिको निम्ति उद्यम सुखका आधारहरु हुन् । तात्पर्य सुख र दुःखका मूख्य आधारहरु र प्राप्तिपनि भौतिक नै हुन् । भौतिकवस्तुको अनन्त अभ्यास वा व्यवहारले एउटा भौतिकीय विचारको सत्ता जन्माएको छ, जसले दुःख र सुखको प्राप्ति, प्राप्तिको निम्ति उद्यम र सम्भावित परिणामको अनुमानले मानवीय मनभित्र खुशी र दुःखको भाव उत्पन्न गराउँंदछ । सन्तोषको भाव यस्तै मानवीयसुख हो, जो थोरैमापनि अनुभूत गरिन्छ । ।।।सन्तोषी महासुखी, जब आए सन्तोष धन, सबधन धुरि समान ।’तर सुखका यी व्याख्याहरु वैयक्तिकसुखका मात्र हुन् । सम्पूर्ण समाज वा जगत अभावग्रस्त वा दुःखी रहुन्जेल वास्तविक सुखको अनुभूति गर्न सकिँंदैन । तपाँंईका गोडामा काँंडाको एउटा टुक्रा रहुन्जेलसम्म वा पीडाको सानो अंश रहुन्जेल तपाँंई सुखपूर्वक हास्न सक्नुहुन्न । तात्पर्य के हो भने संसारमा अभाव, असमानता, र भेदभाव रहेसम्म सुखीसमाजको कल्पना गर्न सकिँंदैन । यस अर्थमा सुख मानिसको निम्ति एउटा विश्वव्यापी लक्ष्य हुनसक्दछ र यसको निम्ति इमानदार प्रयास वा उद्यमले साना–साना खुशी वा सुख वा सन्तोषको सृजना गर्नसक्दछ । त्यो दार्शनिक वाक्य तपाईले पनि थाहापाएको हुनुपर्दछ — अभावजन्य जगतमा दुःख स्थायीभाव हो भने सुख क्षणिक, जुन सुखको निम्ति गरिएका उद्यमहरुबाट उत्पन्न हुनेगर्दछ । पर्व र उत्सवहरुमा धार्मिक कर्तव्यको बाध्यता हटाईदिने हो भने आमजनले कम्तीमा क्षणिक सुखको अनुभूति गर्नसक्दछन् । होइनभने पर्व र उत्सवहरु सम्पन्न मानिसहरुको निम्ति मौजमस्तीजन्य आनन्द हुनसक्दछ , अभावग्रस्त आमजनको निम्ति धार्मिक कर्तव्यको सन्तुष्टि त होला , खुशी त खै !